Waa maxay Mashiinka Qulqulaya iyo sidee u shaqeysaa? - Ellicott Dredges
Waa maxay Mashiinka Qashin-qubka
Mashiinka qodku waa bamka isweydaarsiga jiifka ah waana garaaca wadnaha. Waxaa loogu talagalay inay wax ka qabato walxaha granular-xoqan iyo walxaha adag ee cabirka yar ee ganaaxa. La aanta bamka qodidda, qodjiraha wax soo gooyaa ma awoodi doono inuu qaado slurry.
Mashiinka qashin-qubka waxaa loogu talagalay in lagu qaado qashin, qashin, iyo waxyaabo kale oo waxyeello leh oo laga soo qaado dabaqa dusha oo la galiyo tuubo wax lagu nuugo, iyada oo loo sii qaadayo maaddada aagga dheecaanka iyada oo loo marayo dhuumaha. Bamku waa inuu awood u yeeshaa inuu wax ka qabto jajabyada adag ee wadajirka ah ee cabirrada kala duwan leh oo awood u leh inuu soo maro mashiinka, isagoo yareynaya waqtiga dhimista ee looga baahan yahay nadiifinta.
Sidee bay bambooyinku u shaqeeyaan?
Mashiinka hareeraha waxaa ku jira guntin bamka lagu rido iyo qalab wax kiciya Qalabka wax lagu xiro waxaa lagu dhejiyaa gudaha mashiinka bamka waxaana lagu dhejiyaa mashiinka wadista iyada oo loo marayo gearbox iyo usheeda dhexe. Qaybta hore ee galka mashiinka ayaa lagu xiraa iyadoo la isticmaalayo dabool nuugid, iyadoo si toos ah ugu xirmeysa dhuumaha wax soo nuugaya. Dheecaanka qashin-qubka ayaa la dhigaa meel u dhow dusha sare ee bamka dreege-ka wuxuuna kuxiran yahay xariiq dheecaan gaar ah.
Dareereeyaha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mashiinka qashin-qubka wuxuuna la mid yahay taageere ku qasba hawada inuu abuuro xoog wax soo nuugista. Tuubbada nuugista, faakiyuumkani wuxuu nuugaa xoqitaanka oo wuxuu ku sii qaadaa maaddada iyada oo loo marayo dhuumaha dheecaanka.
Sifooyinka Sifooyinka Sunta
Qulqulka goynta qalliinka ayaa sida caadiga ah lagu qalabeeyay tuubbooyin jilicsan oo buluug ah oo leh bartilmaameedka ay ku taallo ama ka hooseyso khadka biyuhu u soosaaraan dheeraad ah iyo waxtarka soo nuugista.
Bamka biyo-baxa waxaa loogu talagalay in lagu dhaqaajiyo mug weyn oo dareeraha iyo adkaha ah.
Xaaladaha ku habboon, mashiinka bamgareynta wuxuu soosaari karaa dheecaanka dheecaanka dheereeya ee ka dheereeya xawaaraha qeybta ugu dhaqsaha badan.
Moodooyinka qaarkood ayaa abuuri kara cadaadis dareeraha illaa 260 ft. (80 m) madax.
Waxqabadka guud ee bamgareynta guud waa la saadaalin karaa, in kasta oo ay jirto qaab isku socod gudaha ah oo adag.
Xulashada Mashiinka Dhoobaya
Inta badan heerka qadiimiga ah waxaa loo qaabeeyey oo lagu rakibay bambad qumman oo cabbir ah si loo gaaro guud ahaan waxsoosaarka wax soo saarka Xaaladaha halka cabbirka iyo nooca mashiinka aan la qeexin, waxaa habboon in la tixgeliyo qodobbada soo socda marka la dooranayo bamka qodidda iyo qodista: nooca iyo dhumucda walxaha la tuuro, ha ahaato naaftada ama korontada koronto, injirta HP (kw) ayaa loo baahan yahay, bamgareynta waxqabadka bamgareynta, adkeysiga, fudeydka dayactirka, iyo iskucelceliska nolosha ee xaaladaha hawlgalka caadiga ah, dhammaan astaamaha muhiimka u ah habka xulashada. Muhiimad siman ayaa u dhiganta cabbirka dhuumaha ku habboon iyo halabuurka si loo ilaaliyo socodka saxda ah ee walxaha iyada oo aan la xirayn dhuumaha iyo in la ilaaliyo wax soo saarka mashiinka loo baahan yahay si loo dhammaystiro shaqada.
Ellicott Dredges, LLC waxay bixisaa xariiq u gaar ah oo ah bambooyin qoditaan oo loogu talagalay waxqabadka ugu fiican ee cutub kasta oo jare xirmay waxaana lagu cadeeyay dalabyo kala duwan oo daafaha dunida ah inay aad ugu kalsoon yihiin qaadida alaabada baabi'isa iyo waxyaabaha adag.